एमाले अध्यक्षका लागि चार जनाको दाबी, सर्वसम्मत अध्यक्ष छान्ला कि निर्वाचन गर्ला ? - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ एमाले अध्यक्षका लागि चार जनाको दाबी, सर्वसम्मत अध्यक्ष छान्ला कि निर्वाचन गर्ला ?
एमाले अध्यक्षका लागि चार जनाको दाबी, सर्वसम्मत अध्यक्ष छान्ला कि निर्वाचन गर्ला ?
सिन्धु खबर बिहीबार, २०७८ पुस २२ / २१:००
चौतारा । नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला नेतृत्वका लागि आकांक्षीहरुको लर्को देखिएको छ । अध्यक्षमा मात्रै चार जनाले आकांक्षा देखाएका छन् । अध्यक्षमा मात्रै हैन पदाधिकारीमा समेत आकांक्षीको लर्को देखिएको छ ।
शुक्रबारदेखि बाह्रबिसेमा सुरु हुने अधिवेशनले पदाधिकारीसहित १ सय १० सदस्यीय जिल्ला कमिटी चयन गर्नेछ । शुक्रबार हुने उद्घाटन सत्रपछि हुने बन्द सत्रमा नेताहरुले अधिकतम सहमतिको प्रयासबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास गर्नेछन् । सो प्रयास सफल नभए एमाले सिन्धुपाल्चोकको अधिवेशन एक हप्तासम्म लम्बिन सक्ने एमालेका जिल्ला नेताहरुले बताएका छन् ।
एमाले सिन्धुपाल्चोक अध्यक्षका लागि अहिलेसम्म चारजनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । अध्यक्षमा दाबी पेश गर्नेमा केदार क्षेत्री, कमल नेपाल, होमनारायण श्रेष्ठ र बालकृष्ण देउजा छन् । देउजा नेकपा एमाले अधिवेशन आयोजक कमिटीका सहसंयोजक छन् भने नेपाल नेकपा एक हुनुअघिको नेकपा एमालेको सचिव रहेका छन् । श्रेष्ठ र क्षेत्री जुगल र बलेफि गाउँपालिका अध्यक्ष छन् ।
सहमतिबाट अध्यक्ष चयन गर्ने भएमा मात्रै नेपाल र देउजाले अध्यक्ष बन्ने बताइसकेका छन् ।
यदि निर्वाचन नै हुने भएमा दुवैले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सक्ने स्रोतले बताएको छ । तर, चुनाव हुदाँ भने श्रेष्ठ र क्षेत्रीबीच प्रतिष्पर्धा हुने एमाले सिन्धुका एक नेताले बताए । `सर्वसम्मति गर्ने प्रयत्न गरेपनि केन्द्रमा जस्तै अध्यक्षमा भने प्रतिष्पर्धा हुने धेरै सम्भावना छ´, ती नेताले भने । श्रेष्ठ अध्यक्ष केपी ओली निकट मानिन्छन् भने तत्कालीन एमाले हुँदा क्षेत्री माधव कुमार नेपाल निकट मानिन्थे । एमाले विभाजित भएपश्चात नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी खोलेसँगै क्षेत्री अभिभावकविहीन भएका छन् ।
अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीमा पनि आकांक्षीको लर्को देखिएको छ । सचिवमा जेपी सिलवाल, कृष्णगोपाल तामाङ, चन्द्र थिङ र विष्णुमणि आचार्य आकांक्षी देखिएका छन् ।
पदाधिकारीमा उठ्नलाई पनि एमालेले क्राइटएरिया तोकेको छ । एमाले संगठन विभागले दुई कार्यकाल जिल्ला कमिटीमा सदस्य रहेर काम गरेको तथा सचिवालयमा रहेकाले मात्रै पदाधिकारीमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
एमालेको आठौँ अधिवेशन र नेकपा एक भएपछिको कार्यकाललाई आधार मान्ने हो भने दुई कार्यकाल हुने र यदि २०७० मा भएको एमाले जिल्ला अधिवेशनलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने एक कार्यकाल मात्रै हुनेछ । यसबारे प्रष्ट उल्लेख नहुँदा कसको कति अवधि पुग्ने अन्योलकै अवस्था देखिन्छ ।
निर्वाचन कमिटीले पदाधिकारीमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत एक एक जना बनाउन चाहेको र एउटा गाउँपालिकाबाट पाँच जना सदस्य हुने गरि बनाउन खोजेको छ । तर यो अनिवार्य नभएको बताइन्छ । सर्वसम्मतिका लागि एमालेले शेरबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा अध्यक्ष मण्डलको टिम बनाएको छ । अध्यक्ष मण्डलमा तामाङका साथै अरुण नेपाल, सरेश नेपाल, डम्बर बहादुर अर्याललगायत छन् । त्यसले अधिकतम सहमति गरेर अध्यक्ष लगायत सबै कार्यसमिति चयन गर्नेछ । यदि अध्यक्ष मण्डलले चयन गर्न नसके निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने एमाले सिन्धुको तयारी छ ।